​किन रिसाइन् ‘फन्ने खाँ’ निर्मातासँग ऐश्वर्या ?
Monday, 25 Jun, 2018 3:09 PM
काठमाडौं । बलिउड फिल्म ‘फन्ने खाँ’को प्रचार सामग्री पोस्टरको फस्ट लुक सार्वजनिक भएको छ । तर, यस फिल्मप्रति अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन खुसी छैनन् । फिल्मको गीतलाई लिएर ऐश्वर्याले विमती जनाएपछि निर्माता पनि चिढिएका छन् ।
समाचारमा जनाइएअनुसार फिल्म ‘फन्ने खाँ’को एउटा गीतको शब्द मन नपराएपछि ऐश्वर्याले निर्माणपक्षलाई परिवर्तन गर्न लगाएकी थिइन् । तर, त्यसअघि फिल्मका निर्माताले ऐश्वर्याको पारिश्रमिक घटाउन अनुरोध गरेका थिए । ऐश्वर्या र निर्माताबीच उक्त तनावको नयाँ रहस्य खुलेको छ ।
एक रिपोर्टअनुसार फिल्ममा हस्ताक्षर गर्नुअघि ऐश्वर्यालाई उच्चतम शुल्क प्रदान गर्ने भनिएको थियो । तर, पछिल्लो हप्ता, ऐश्वर्याले अनिल कपूर र राजकुमार रावको पारिश्रमिक थाहा पाइन् । उनीहरुले पनि ऐश्वर्या रायजस्तै उस्तै शुल्क दिइएको रहेछ । त्यो कुुरा थाहा पाउनेवित्तिकै ऐश्वर्या रिसाएकी हुन् । उनले यसबारे निर्मातासँग कुरा गरी निर्णय गर्ने बताएकी छन् ।
भनिन्छ, फिल्म ‘फन्ने खाँ’मा ऐश्वर्या हट आइटम नम्बर देखिँदैछिन् । ऐश्वर्याले गीतको सन्दर्भमा कुरा चलाउँनको कारण पनि त्यही हो किनकि गीत उनको चित्त बुझ्दो थिएन । उनी चाहन्थिन्, ‘फिल्मको सम्पूर्ण गीत नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ जसमा निर्माताले विचार गर्ने भनेका छन् ।
फिल्मको गीतलाई लिएर कोरियोग्राफर र निर्देशकको समेत विचार मिलेको छैन । निर्देशकको भनाइ छ, ‘उक्त गीतको सुट ठीक तरिकाले भएको छैन ।’ ऐश्वर्या खुसी हुने कुरै भएन । फिल्मको मुख्य अभिनेत्री नै खुसी छैनन् भने निर्मता खुसी होलान् त ? यो फिल्मको टिजर २६ जुन अर्थात भोली रिलिज हुँदैछ ।